Blog nke Olga Steshkina Blog nke Olga Steshkina
Blog nke Olga Steshkina
Gịnị kpatara na ọ dị njọ iri ihe niile eghere eghe? Gịnị kpatara na ọ dị njọ iri ihe niile eghere eghe? 2021-10-23 19:01:04	Питание Olga Sologub Kedu ihe kpatara na ọ dị njọ iri anụ eghe? Nchegbu kachasị nke ọma bụ anụ e ghere eghe. Mgbe a na-eghe, gụnyere n'elu unyi, a na-emepụta ogige, nke dị elu ... Gụọ
Gịnị mere ị chọrọ ganache? Gịnị mere ị chọrọ ganache? 2021-10-23 19:01:04	Питание Olga Sologub Gịnị mere ganache ji kwụsie ike? Ọ bụrụ na a na -ekwe ka ganache dị larịị kwụsie ike, mgbe ahụ ọ gaghị enwe ederede dị larịị, kama ọ bụ nke ọka n'ihi ezughi oke abụba (abụba abụba dịkwa oke ... Gụọ
Ajụjụ: Kedu mgbe ị ga-eme Ista 2022? Ajụjụ: Kedu mgbe ị ga-eme Ista 2022? 2021-10-23 19:01:04	Питание Olga Sologub Kedu mgbe ị kwesịrị ime Ista? Dị ka omenala si dị, ọ bụ omenala ịme paschi na Wednesday, Maundy Thursday na Saturday. Ọ bụrụ na achịcha Ista e mere na Wednesde jisiri ike tụfuo ịdị ọhụrụ ha site na ezumike ... Gụọ
Azịza kacha mma: Ọkwa ole ka ọ na -ewe iji ghee àkwá? Azịza kacha mma: Ọkwa ole ka ọ na -ewe iji ghee àkwá? 2021-10-23 19:01:04	Питание Olga Sologub Ogologo oge ole ka ị ga-eghe akwa? Wunye akwa n'ime ite a na-ekpo ọkụ (dobe efere ahụ nso n'elu pan ahụ). Fri àkwá maka nkeji 1 n'elu nnukwu ọkụ. Mgbe ahụ ọkụ ... Gụọ
Ọ dị m mkpa itinye akwa na achịcha? Ọ dị m mkpa itinye akwa na achịcha? 2021-10-23 19:01:04	Питание Olga Sologub Kedu ihe bụ akwa na mgwakota agwa yist? A na -agbakwunye àkwá iji mee ka mgwakota agwa nwee protein na vitamin; ihe ndị e ji esi nri na -atọ ụtọ ma nwee ahụike. Ka pies na buns ghara ... Gụọ
Ajụjụ gị: Otu esi echekwa ihendori balsamic? Ajụjụ gị: Otu esi echekwa ihendori balsamic? 2021-10-23 19:01:04	Питание Olga Sologub Kedu ka esi echekwa ude balsamic? Chekwaa na okpomọkụ site na -5'C ruo +30'C na iru mmiri nke 75%. Chekwaa karama ahụ na refrjiraeto mgbe emepechara. Otu esi echekwa mmanya mmanya balsamic... Gụọ
Ọgịrịga anụ ezi ghere eghe
Ekele, ezigbo ndị ọkachamara n'ihe gbasara nri. Ọ na -amasị gị ọgịrịga gị nke ọma ma sie ya ma ọ bụ sie ya na oven? Enwere m naanị otu ... Gụọ
Esi esi esi nri ọgịrịga anụ ezi ghere eghe na marinade teriyaki - uzommeputa site na nzọụkwụ site na foto 2017-11-13 12:07:25 Ntuziaka
Tinye omelet na -esi nri na oven Otu esi esi esi nri omelet mbụ na puff pastry na oven maka nri ụtụtụ - uzommebe site na nkwụsị 2017-09-28 11:53:16 Ntuziaka
Ekele m, ọmarịcha gourmets m. Gwa m, ọ na -amasị gị nri dị mfe ịme? Enwere m ụdị ịhụnanya ahụ maka isi nri ngwa ngwa mgbe nwa m nwoke bidoro ịga ije. Gụọ
Akpụkpọ ụkwụ ọkụkọ na oroma na lemon Esi esi nri apata ụkwụ ọkụkọ na oroma na lemon n'ime oven - uzommebe site na ntinye site na foto 2017-09-15 12:08:35 Ntuziaka
Ekele, ndị hụrụ ihe ọma na nri ụtọ n'anya. Echere m na ị gaghị agọnarị na nnụnụ na -aga nke ọma na mkpụrụ osisi na mkpụrụ osisi. Dịka ọmụmaatụ, efere mbinye aka nke mmemme ememme ... Gụọ
Otu esi esi nri ratatouille nke ọma Otu esi esi nri ratatouille n'ụzọ ziri ezi-usoro nri kwụ ọtọ nke nwere foto na-atọ ọnụ 2017-09-11 11:57:48 Ntuziaka
Ndewo ndị m hụrụ n'anya. N'oge na -adịbeghị anya, ekiri m katuunu "Ratatouille". Ezigbo akụkọ na ihe ọ bụla ịchọrọ nwere ike imezu ma ọ bụrụ na ị kwụsịghị. Nwee nrọ -… Gụọ
Nri poteto na cheese Isi nri osikapa na -atọ ụtọ na chiiz - uzommebe site na nzọụkwụ site na foto 2017-09-04 12:01:10 Ntuziaka
Ekele, ezigbo ndị ọkachamara n'ihe gbasara nri. Achọpụtara m na ọtụtụ ndị enyi m na -ejikọ casserole na achịcha na -eko achịcha. Ma eleghị anya n'ihi na casseroles chiiz mikpuru n'ime mkpụrụ obi, nke ... Gụọ
TOP-5 n'ime otu ọnwa
Kabeeji braised na pan
Cheese waffles na igwe waffle eletriki - usoro nzọụkwụ site na nzọụkwụ na foto
Ofe ọkụkọ dị mfe - Ntụziaka nri
Kabeeji pickled ngwa ngwa
Donuts cheese - usoro dị mfe site na usoro nri na foto
Isiokwu kacha elu
Kedu esi esi nri na blender?
Taa na kichin ị nwere ike ịhụ ụyọkọ ngwaọrụ bara uru.
Nri Ducan, ogbo 2 "Cruise"
Nri nke Dukan 2 ogbo - ihe dị mkpa maka usoro “ntụgharị”, ...
Nwepu nri 60 - menu maka izu
Ụzọ ị ga -esi felata nke na -enye gị ohere ịghara agụụ. Nwepu nri 60 ...
Nri Dukan - usoro na menus
Kedu ihe bụ isi nri nri Dukan, nke ...
Ndị na -eri nri ama ama ama ama n'ụwa
Ndị ama ama ama ama ama n'ụwa na -ekerịta echiche ha banyere ...
More gbasara nri
Ajụjụ: Kedu mgbe ị ga-eme Ista 2022? Ajụjụ: Kedu mgbe ị ga-eme Ista 2022? 2021-10-23 19:01:04 Питание Olga Sologub Kedu mgbe ị kwesịrị ime Ista? Dị ka omenala si dị, ọ bụ omenala ịme paschi na Wednesday, Maundy Thursday na Saturday. Ọ bụrụ na achịcha Ista e mere na Wednesde jisiri ike tụfuo ịdị ọhụrụ ha site na ezumike ... Gụọ
Ajụjụ gị: Otu esi echekwa ihendori balsamic? Ajụjụ gị: Otu esi echekwa ihendori balsamic? 2021-10-23 19:01:04 Питание Olga Sologub Kedu ka esi echekwa ude balsamic? Chekwaa na okpomọkụ site na -5'C ruo +30'C na iru mmiri nke 75%. Chekwaa karama ahụ na refrjiraeto mgbe emepechara. Otu esi echekwa mmanya mmanya balsamic... Gụọ
Gịnị mere ị chọrọ ganache? Gịnị mere ị chọrọ ganache? 2021-10-23 19:01:04 Питание Olga Sologub Gịnị mere ganache ji kwụsie ike? Ọ bụrụ na a na -ekwe ka ganache dị larịị kwụsie ike, mgbe ahụ ọ gaghị enwe ederede dị larịị, kama ọ bụ nke ọka n'ihi ezughi oke abụba (abụba abụba dịkwa oke ... Gụọ
Azịza kacha mma: Ọkwa ole ka ọ na -ewe iji ghee àkwá? Azịza kacha mma: Ọkwa ole ka ọ na -ewe iji ghee àkwá? 2021-10-23 19:01:04 Питание Olga Sologub Ogologo oge ole ka ị ga-eghe akwa? Wunye akwa n'ime ite a na-ekpo ọkụ (dobe efere ahụ nso n'elu pan ahụ). Fri àkwá maka nkeji 1 n'elu nnukwu ọkụ. Mgbe ahụ ọkụ ... Gụọ
Gịnị kpatara na ọ dị njọ iri ihe niile eghere eghe? Gịnị kpatara na ọ dị njọ iri ihe niile eghere eghe? 2021-10-23 19:01:04 Питание Olga Sologub Kedu ihe kpatara na ọ dị njọ iri anụ eghe? Nchegbu kachasị nke ọma bụ anụ e ghere eghe. Mgbe a na-eghe, gụnyere n'elu unyi, a na-emepụta ogige, nke dị elu ... Gụọ
Ọ dị m mkpa itinye akwa na achịcha? Ọ dị m mkpa itinye akwa na achịcha? 2021-10-23 19:01:04 Питание Olga Sologub Kedu ihe bụ akwa na mgwakota agwa yist? A na -agbakwunye àkwá iji mee ka mgwakota agwa nwee protein na vitamin; ihe ndị e ji esi nri na -atọ ụtọ ma nwee ahụike. Ka pies na buns ghara ... Gụọ
Ihe gbasara nri
Ihe niile ịchọrọ ịjụ maka nri Maggi Ihe niile ịchọrọ ịjụ gbasara nri Maggi - azịza nye ajụjụ ndị a na -ajụkarị 2018-10-23 14:30:07 diets Olga Sologub Nchịkọta nke ajụjụ ndị a na -ajụkarị banyere nuances nke nri Maggi. Ugboro ole ka ị nwere ike ikwugharị, ihe ị ga -eme ma ọ bụrụ na ibu ahụ akwụsịla, ihe ị ga -eme ma ọ bụrụ na emebi iwu ahụ, kedu oke nha, ihe ị ga -eme ma ọ bụrụ afọ ntachi. Akwụkwọ nri na mkpụrụ osisi enyere ohere, kedu ka ị ga -esi dochie àkwá, ụdị azụ ọ ga -eri yana ma mmanya ma mmanya. Gụọ
Kedu nri na-atụnye ụtụ na ọnwụ Kedu nri ga -enyere aka mee ka metabolism dị ngwa, gbaa abụba ọkụ ma kwalite oke ibu? 2017-12-17 21:18:32 diets Olga Sologub Ka oke ibu wee pụọ ngwa ngwa, ịkwesịrị iri nri na -eme ka metabolism dị ngwa na ahụ mmadụ. Kedu ndị ga -enyere aka na nke a? Ị nwere ike ịchọta ndepụta nke ndị kacha mma n'isiokwu a. Ofe obere kalori, ọka na akwụkwọ nri dị mma maka ifelata ngwa ngwa. Akwụkwọ nri dị ka ngwa nri na -agbasasịkwa nri - ha na -agba abụba ma na -akwalite oke ibu, ọkachasị na afọ na akụkụ. Gụọ
Gbuo ibu na ginger a pịrị apị Etu ị ga -esi felata nke ọma: ginger pickled ọ dị mma maka ifelata? 2017-11-01 11:59:14 diets Olga Sologub Ike gwụrụ ịlụ ọgụ oke ibu? Gbalịa ginger ginger maka ịbelata ibu. N'isiokwu a, anyị anakọtara ndụmọdụ bara uru maka otu esi ewere ginger, gram ole ka ọ dị kwa ụbọchị, ole tụfuru, ma ọ bụrụ na ejiri ya mee nke ọma. Nakwa uzomume bara uru maka ginger pickled n'ụlọ, uru na ọghọm nke ngwaahịa a. Gụọ
Ihe ị ga -eri ka ị felata Nri kwesịrị ekwesị na mmega ahụ bụ isi ihe na -eme ka ọ dị gịrịgịrị. Kedu ihe ị ga -eri ka ị felata? 2017-10-27 11:44:46 diets Olga Sologub Ibu oke ibu bụ nsogbu dịtere aka na ọha mmadụ ọgbara ọhụrụ. N'ịlụ ọgụ megide ya, mmega ahụ na ịgụta kalori na -abịa napụta. Site n'edemede a, ị ga -amụta ihe ị ga -eri ka ị felata, ụdị nri ị ga -ahọrọ, na maka nsonaazụ kacha mma, ị ga na -emega ahụ mgbe niile, na -agagharị karịa, ma na -agba ọsọ nke ọma. Gụọ
Nri ụtụtụ nke abụọ maka ifelata Ọ bụ "nri ụtụtụ nke abụọ" bụ ngwa ọgụ dị arọ? 2017-10-14 11:57:27 diets Olga Sologub Ọtụtụ ndị mmadụ na -arụ ụka na nri ụtụtụ siri ike bụ isi ihe na -eme ka ụbọchị nwee ihe ịga nke ọma. Otú ọ dị, ọ bụghị. Ọ kacha mma ka e kewaa nri ụtụtụ gị na ọkara. N'ụzọ dị otu a ị ga -enweta ọnụ ahịa karịa. Gụọ
Ihe na -eyi egwu ịtụle ugboro ugboro Kedu ihe ọghọm nke ịtụle ugboro ugboro yana otu esi achọta izu oke zuru oke 2017-10-12 11:58:59 diets Olga Sologub Ọtụtụ ndị mmadụ na -ekiri ịdị arọ ha. Mana ụfọdụ na -enwe oke mmasị na nke a. Kedu otu esi achọta ihe ọla edo pụtara? Ọ dị nfe ịdị na -ele anya n'ike Gụọ
More gbasara ịdị gịrịgịrị
Mmega ahụ Kegel maka ụmụ nwanyị Kedu otu esi eme mmega ahụ Kegel maka ụmụ nwanyị nọ n'ụlọ? 2018-04-02 11:56:23 Ịdị nwayọ Olga Sologub Mmega ahụ Kegel na -akụda ma ọ bụ na -emegharị ahụ bụ mgbatị ahụ na -akwụghachi ụgwọ. Site n'edemede ahụ ị ga -amụta ihe ọ bụ, usoro esi eme mgbatị ahụ dị mma maka ụmụ nwanyị nọ n'ụlọ, enwere contraindications maka hemorrhoid na cystitis, ọ ga -ekwe omume ime ya n'oge ịhụ nsọ. Nakwa usoro nkuzi maka ndị mbido na ịme bọọlụ. Gụọ
Mmega ahụ Kegel maka ụmụ nwanyị dị ime Kedu otu esi eme mmega ahụ Kegel maka ụmụ nwanyị dị ime yana enwere contraindications maka ha? 2018-03-30 11:56:22 Ịdị nwayọ Olga Sologub Mgbatị ahụ gụnyere mmega ahụ Kegel bara uru maka ụmụ nwanyị dị ime ruo izu iri anọ. Ọ kacha mma ịmalite ịme mmega ahụ n'ime ọnwa atọ nke mbụ, mana a ga -ahụ uru ya na 40nd na 1rd. N'isiokwu a, ị ga -ahụ ozi gbasara otu esi eme mgbatị ahụ n'ụlọ, nyocha na contraindications. Gụọ
Mgbatị ahụ Kegel Ball Egwuregwu mmega ahụ chiri anya na bọọlụ Kegel: ihe ọ bụ na otu esi eji ha nke ọma 2018-03-28 12:14:18 Ịdị nwayọ Olga Sologub Ikwusi akwara akwara maka ụmụ nwanyị nwekwara ike n'ụlọ. Maka nke a, ịchọrọ akwa ma ọ bụ bọọlụ Kegel. Kedu ka esi eji simulator dị otú a? Ka anyị chọpụta ihe ha bụ, ihe ha bụ na otu esi eme mgbatị ahụ. N'isiokwu a, ị ga -ahụ ntuziaka maka otu esi eji bọọlụ, ndụmọdụ maka otu esi ahọrọ nha maka ndị mbido, otu esi etinye na ka ha si arụ ọrụ. Gụọ
Omume iku ume Nkeji iri na ise kwa ụbọchị maka ahụ dị gịrịgịrị - mmega iku ume maka ịbelata afọ 2018-03-09 11:58:03 Ịdị nwayọ Olga Sologub Imega ihe dị ka nkeji iri na ise kwa ụbọchị nwere ike ịrụpụta ezigbo ihe. O zuru ezu ịmụta mmega iku ume iji felata n'afọ. Kedu ihe ọ bụ? N'isiokwu a, ị ga -ahụ nkọwa nke mgbanwe ahụ Marina Korpan, mgbatị ahụ Strelnikova, jianfei maka ndị mbido na klaasị dịka usoro ndị Japan siri dị. Ị nwekwara ike gụọ nyocha ma lelee vidiyo na -egosi isi mmega ahụ n'ime naanị nkeji asatọ. Gụọ
Mmega ahụ Slimming Belly Ịchọrọ ịma mmega ahụ maka ịbelata afọ, afọ na hips kacha arụ ọrụ? 2018-03-07 11:58:05 Ịdị nwayọ Olga Sologub Enwere ike ịme mmega ahụ ọ bụghị naanị na mgbatị ahụ, kamakwa n'ụlọ, ịnọdụ ala n'oche. N'isiokwu a, ahọpụtara mgbatị ahụ dị mma maka ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị - na fitball, mgbagwoju iku ume bodyflex, mmanya static na ndị ọzọ. Dumbbell na -eme mgbatị afọ na akụkụ, hips, isi na ogwe aka. Gụọ
Gịnị bụ igwe Kegel maka? Kedu ihe ndị na -enye ọzụzụ Kegel vaginal maka? Ụkpụrụ ọrụ na ntuziaka maka ojiji 2018-03-06 11:56:56 Ịdị nwayọ Olga Sologub Maka ụmụ nwanyị, ike nke akwara pelvic ga -ekwe omume site n'enyemaka nke ndị na -eme simulators Kegel. Kedu ihe ọ bụ, otu esi eji bọọlụ ma enwere contraindications ọ bụla - gụọ n'isiokwu a. Yana nyocha ndị dọkịta, otu esi ahọrọ na ebe ị ga -azụta ụdị ịhịa aka n'ahụ, ọ ga -ekwe omume ịme ya n'onwe gị n'ụlọ yana nkọwa nke ụdị ndị ama ama - Magic Kegel Master na kGoal. Gụọ
More gbasara ịma mma
Kedu ihe bụ ihu mbido Ihu ihu: ihe ọ bụ na otu esi eji ya + ogo ngwaahịa kacha mma 2019-01-24 15:59:02 Gbanyụọ Olga Sologub Ehihie ọma, ndị na -agụ blọgụ hụrụ n'anya! Ị ma ihe ịcha ntutu bụ? Ndị na -agbaso ndụmọdụ nke ndị na -ese etemeete ọkachamara etinyela ngwaahịa a n'ime akpa ịchọ mma ha. Ma ọ bụghị ... Gụọ
Uru nke hyaluronic acid maka ihu Kedu uru nke hyaluronic acid maka ihu: iji na cosmetology na n'ụlọ 2018-08-29 09:21:57 Gbanyụọ Olga Sologub Kedu ihe bụ hyaluronic acid maka ihu? Ka anyị chọpụta ihe kpatara mkpa hyaluronic ji dị mkpa, ka esi eji ude na ọbara eme ihe n'ụlọ, iji ntụtụ, mesotherapy na biorevitalization maka ndọlị, maka egbugbere ọnụ na nasolabial folds na cosmetology. Ihe mgbochi n'oge afọ ime ma ọ ga -ekwe omume ịpịa n'oge ọkọchị. Nyocha usoro na foto tupu na mgbe emechara. Gụọ
Kedu ihe bụ ọgwụgwọ ozone maka ihu Kedu ihe bụ ọgwụgwọ ozone maka ihu yana ego ole usoro ọgwụgwọ anụ ahụ na -efu? 2018-08-24 14:21:54 Gbanyụọ Olga Sologub Enweela mmetụta bara uru nke ozone na akpụkpọ ahụ na cosmetology. Site n'isiokwu a, ị ga -amụta ihe ọgwụgwọ ozone bụ maka ihu nwere foto tupu na mgbe ọ gachara, ọnụ ahịa ya, otu o si enyere aka n'ịgwọ ihe otutu, ihe otutu, rosacea, na maka ihu ihu na olu. Kedu ihe bụ contraindications, nsonaazụ na nsogbu. Ọ ga -ekwe omume iji ya n'ụlọ na n'oge ime, ego ole ka usoro nhazi ga -eri? Gụọ
Bronzer maka ihu na ahụ Kedu ihe bụ ọla maka ihu na ahụ maka: ihe ọ bụ na usoro nzọụkwụ maka itinye ya n'ọrụ 2018-08-20 14:05:12 Gbanyụọ Olga Sologub Akpụkpọ ahụ na -enwu enwu bụ nrọ nwa agbọghọ ọ bụla. Site n'edemede a, ị ga-amụta ihe ọla maka ihu na ahụ bụ, ihe ọ bụ maka, eserese nzọụkwụ site na foto nke otu esi etinye ya n'ọrụ ma jiri ihe ngosi mee ihe n'ụzọ ziri ezi, otu esi ahọrọ ngwaahịa maka akpụkpọ anụ , nke ka mma ịzụta - ntụ ntụ ma ọ bụ mmiri mmiri, na -enyocha foto tupu na mgbe banyere ụdị Clarence, Mac, Dior, Letual na ndị ọzọ. Gụọ
Ọ pụtara maka ibelata pores Nyochaa ihe ịchọ mma kachasị mma na ọgwụgwọ ndị mmadụ iji belata pores dị n'ihu 2018-04-01 12:17:03 Gbanyụọ Olga Sologub Mgbe ị na -ahọrọ ọgwụgwọ kachasị mma maka ibelata pores dị na ihu, ịkwesịrị ịma na ị nwere ike zụta nkwadebe ọgwụ dị irè ma ọ bụ kwadebe ezigbo nkpuchi ndị mmadụ n'ụlọ. Ọ nwere ike ịbụ ude, ụrọ ịchọ mma ma ọ bụ ihe mkpuchi nwere ọgwụ aspirin, poteto na lemon, ma ọ bụ mmanụ a honeyụ. Gụkwuo na akụkọ ahụ, ebe ị ga -ahụkwa nyocha na ọnụ ahịa ihe ntecha. Gụọ
Kedu ihe na -egosi ihu Kedu ihe ngosi ihu na otu esi eji ya: ịmụ ka esi ahọrọ ụcha ma tinye ya n'ọrụ nke ọma 2018-03-31 12:18:51 Gbanyụọ Olga Sologub Ị nweghị ike nweta etemeete zuru oke na -enweghị ihe ngosi. Ka anyị chọpụta ihe ọ bụ na otu esi eji ya nke ọma! N'isiokwu a, ị ga-ahụ usoro nzọụkwụ maka otu esi etinye akwụkwọ na ihu gbara gburugburu, nyocha nke ka mma ịzụta na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị, ọnụ ahịa na ọkwa nke ndị nrụpụta ihe dị mma, foto tupu na mgbe itinyechara ya n'ọrụ, ndụmọdụ na esi họrọ ndò a chọrọ. Gụọ
Ndewo, aha m bụ Olga. Na -achọ usoro nri dị mma maka ịma mma na ahụike? Mgbe ahụ nabata na blọọgụ m. More gbasara m
Banyere saịtị ahụ
1983-2020 Blog nke Olga Steshkina A na -agba ume idetu ihe ahụ naanị ma ọ bụrụ na enwere njikọ na -arụ ọrụ takioki.ru
Gbanwee ntọala nzuzo